TTSweet: ရန်ကုန်စတိုင် ဒန်ပေါက်ချက်နည်း ...
Posted by T T Sweet at 8:32 PM
T T Sweet July 25, 2014 at 8:02 AM
ကျေးဇူးပဲ အိုင်အိုရာရေ။ အပျင်းထူပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာပဲ တိုတိုထွာထွာလေးတွေ တင်နေလို့ ဘလော့ဂ်ဖက် သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့တာ။ သမီးဒီနှစ်အတွင်းမှာ အရမ်းကို ထွားလာတယ်။ နောက်မှ အေးဆေးရေးပါဦးမယ်နော်
Fugitive from the blog reappears again, pls remove the dust first from your blog :)
Anonymous July 13, 2014 at 12:51 AM
T Sweet, It look yummy. It really make me want to eat Biryani.
T T Sweet July 25, 2014 at 8:03 AM
It is not so difficult to cook. Please follow the step only. Thanks for comment.
အမရေ.. လန်ဒန်က အမပရိသတ်ပါ.. မနေ့က အမျိုးသားနဲ့နှစ်ယောက် အမနည်းအတိုင်းဒန်ပေါက်ချက်ကြတာ.. ရန်ကုန်အရသာအတိုင်းပဲ အရမ်းကောင်းတယ် .. အမွှေးအကြိုင်တွေကတော့ဖယ်ရတာခက်တယ်နော်.. အရောင်ကတော့အမောက်မလှဘူးဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမယ့်အရသာတကယ်ကောင်း.. ချက်ရတာခက်မယ်ထင်တာ မခက်ဘူးနော် .. အမျိုးသားက နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ချက်စားမယ်လုပ်နေတာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ
T T Sweet July 25, 2014 at 7:58 AM
ကျေးဇူတင်ပါတယ်ရှင်။ ခုလိုအားပေးတာ။ ရေးရကျိူးနပ်ပါတယ်။ အိမ်မှာလဲ မနေ့ကပဲ တစ်ခေါက်ချက်စားသေးတယ်။ ဟုတ်တယ်။ဒန်ပေါက်ဆို လူတွေက ချက်ရခက်မယ်ထင်နေတာ ခဏခဏချက်ရင် ပိုတောင်လွယ်သေးတယ်။ အိမ်မှာ မစပ်အောင် ငရုပ်သီးမှုန့်ကို sweet paprika နဲ့ချက်တော့ သမီးလဲ စားလို့ရတယ်။ ဒီမနက်ကျောင်းတောင် ထုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုပဲ။
သတငျးထုတျပွနျသူ March 24, 2019 at 7:06 PM
ဒန်ပေါက်ချက်နည်း ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း epub လုပ်ရတာ ဝါသနာပါတာနဲ့ အမရဲ့ ဒံပေါက်ချက်နည်းကို epub လုပ်လိုက်ပါတယ်။
စာသားတွေ ဓါတ်ပုံတွေအတွက် ယူသုံးဖို့ အရင် ခွင့်တောင်းရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ အချိန်ကြာနေမှာစိုးလို့ epub လုပ်ပြီးမှပဲ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်
Credit လည်း အပြည့်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ
epub သာ ဖွင့်ကြည့်ပါတော့